Dhaamsa Begii irraa amma ergame.Isa duraan seene malee Loltuu Oraalii 18tu kaleessa malee dheengadda WBO loluuf seene. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa Begii irraa amma ergame.Isa duraan seene malee Loltuu Oraalii 18tu kaleessa malee dheengadda WBO loluuf seene.
Dhaamsa Begii irraa amma ergame…
“Dr Begiin jira. Isa duraan seene malee Loltuu Oraalii 18tu kaleessa malee dheengadda WBO loluuf seene. Kaleessuma ganamaan Begiirraa ka’uun WBO Begii fi Gidaamii gidduu qubatee jiru rukutuuf bobba’ani.
“Naannoo Gabaa Kamisaa jedhamutti humni ittisa Ummataa WBOn ijaaraamee jiru dursee waan itti qophaayeef dhukaasa itti banee daaraa godhe. Milishoota keessaa nama 3tu wareegame. Dubartii tokko dabalatee ummata nagaa nama 5 waraanni mootummaa itti dhukaasee ajjeese.
“Kana booda humna dabalatanii bobbaasaanii itti fufan. Naannoo “Gaara Akaayii ” jedhamutti haxxee hidhuun WBOn dhukaasa itti baneen hedduu irraa fixee jennaan madoo fi reeffasaanii guurratanii gara Begiitti deebi’an.
“Kan nama dhibu hajajooti waraana mootummaa Amaaraa fi Tigireedha. Loltuun lafoo Oromoo fi saba biraati.
“Akkuma ati barreefama kee keessatti jette jarri kaayyoon ishee Oromoo fi Oromoo wal nyaachistee Oromiyaa diiguudha. Jarri aangoorra jiran gochaa diinaa kana hubatanii yoo dhibdee ABO waliin qaban ilaa fi ilaameen yoo fixatan maal ta’a laata?””Solomon Ungashe
#TIM~Sagaagaltuun Siyaasaa daldalattee galte; dubbiishee kan dhumaa Oromoo Walloo bira dhaquutiin sagalee qallaa kan re’ee fakkaatu sanaan ‘Yaa uummata teennaa hidhannoo hiikkaadhaa….Mootummaa dhaga’aa…’jettee mar’attee gaafa isheedha gamu; gaafa qabsoon hololaashee jalaa bitaa galu as deebite. Lammata waan achi deebitu fakkaattii? Onneeshee ana beeka kkttkktk
Utuu dubbannuu, waliigaltee wayyaaneetiin ijoollee keenya basaasuuf as deebiteeti iccita itti erguurraa of eeggadhaa!!!
Ijollee oromoo ta’aani mooraa diinaa keessa jirani amma yerooni gara lammii ofiitti deebiaanii alagaa nudiineessaa jiruu ofirraa qoluuni.diini waluumaani nufixaa jirtii.
NAMNI JIMAA HARARGEE WAJJIIN HANJAMTU IRRA DEEBITEE YAADUU SIGAAFATA.ETHIOPIA BIRA DARBEE GUUTUU ADDUNYAA DIINAGDEEN UTUBAA JIRA